Bit By Bit - Ịjụ ajụjụ - 3.5.1 ebe obibi nwa oge nnwale
Ndị na-eme nchọpụta nwere ike ibelata nyocha ma gbasaa ha n'ime ndụ ndị mmadụ.
Nnyocha nke oge na-adịru ala (EMA) gụnyere itinye nyocha nke ọdịnala, ịkụkọta ha n'ime iberibe, na ịfesa ha n'ime ndụ nke ndị so na ya. Ya mere, a pụrụ ịjụ ajụjụ nyocha na oge na ebe kwesịrị ekwesị, kama ịme ogologo oge izu ụka mgbe ihe ndị ahụ gasịrị.
A na-eji atụmatụ anọ akọwapụta EMA: (1) nchịkọta data na gburugburu ụwa; (2) nyocha nke na-elekwasị anya na njirimara ma ọ bụ omume ndị dị ugbu a ma ọ bụ na nso nso; (3) nyocha nke nwere ike ịbụ ihe omume, dabeere na oge, ma ọ bụ na-enweghị usoro (dabere na nchọpụta nnyocha); na (4) ịmecha nyocha ọtụtụ oge n'ogologo (Stone and Shiffman 1994) . EMA bụ ihe ịgakwuru ịjụ nke a na-enye aka site na smartphones nke ndị mmadụ na-emekọrịta ugboro ugboro n'ụbọchị. Ọzọkwa, n'ihi na smartphones jupụtara na sensọ-dị ka GPS na accelerometers-ọ na-esiwanye ike ịmalite nha ndị dabeere na ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike ịmepụta smartphone iji kpalite ajụjụ nyocha ma ọ bụrụ na onye nabatara abanye n'otu obodo.
E gosipụtara nkwa nke EMA site nyocha nyocha nke Naomi Sugie. Kemgbe afọ ndị 1970, United States emewo ka ọnụ ọgụgụ nke ndị mmadụ mụbaa nke ukwuu na ọ na-emebi. N'ihe dị ka afọ 2005, ihe dị ka mmadụ 500 n'ime 100,000 ndị America nọ n'ụlọ mkpọrọ, ọnụ ọgụgụ nke mkpọrọ dị elu karịa ebe ọ bụla ọzọ n'ụwa (Wakefield and Uggen 2010) . Ọnụ ọgụgụ a na ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ na-abanye n'ụlọ mkpọrọ emewokwa ka ọnụọgụgụ na ọnụ ọgụgụ na-ahapụ ụlọ mkpọrọ; ihe dị ka mmadụ 700,000 na-ahapụ ụlọ mkpọrọ kwa afọ (Wakefield and Uggen 2010) . Ndị a na-eche ihe ịma aka siri ike ihu mgbe ha na-apụ n'ụlọ mkpọrọ, ọ dị mwute ikwu na ọtụtụ na-alaghachi n'ebe ahụ. Iji ghọta ma belata nlọghachi azụ, ndị ọkà mmụta sayensị na ndị na-eme iwu chọrọ ịghọta ahụmahụ nke ndị mmadụ ka ha na-abanye n'obodo ọzọ. Otú ọ dị, data ndị a siri ike ịnakọta na usoro nyocha nke ndị na-emebu ihe na-esiri ike ịmụ ihe na ndụ ha dị nnọọ egwu. Ntuzi na-eru nso na itinye nyocha ọ bụla n'ime ọnwa ole na ole anaghị echefu ihe dị iche iche na ndụ ha (Sugie 2016) .
Iji mụọ usoro nbanye na nhazi nke kachasị njọ, Sugie weere ihe yiri nke ọma nchịkọta nke mmadụ 131 site na ndepụta zuru ezu nke ndị na-ahapụ ụlọ mkpọrọ na Newark, New Jersey. Ọ nyere onye ọ bụla so na smartphone, bụ nke ghọrọ usoro nchịkọta data nchịkọta, ma maka omume ndekọ na maka ịjụ ajụjụ. Sugie na-eji telifon eme ihe nyocha abụọ. Akpa, o zitere "nyocha nyocha nyocha" na oge a na-ahọrọghi oge n'agbata elekere 9 nke ụtụtụ na elekere 6 nke ụtụtụ na-arịọ ndị na-agụ banyere ọrụ na mmetụta ha ugbu a. Nke abụọ, na elekere asaa nke ụtụtụ, o zipụrụ "nnyocha nyocha kwa ụbọchị" na-ajụ maka ọrụ nile nke ụbọchị ahụ. Ọzọkwa, na mgbakwunye na ajụjụ ndị a nyochaa, igwe na-edekọ ọnọdụ ebe ha nọ n'oge oge ọ bụla ma debe ndekọ ezoro ezo nke oku na ederede meta-data. Iji usoro a-nke na-agwakọta ịjụ na ịdebe-Sugie nwere ike ịmepụta usoro nkọwa zuru ezu, ogologo oge banyere ndụ ndị a ka ha na-abanye n'ime ọha mmadụ.
Ndị nchọpụta kwenyere na ịchọta oru, ọrụ dị oke mma na-enyere ndị mmadụ aka ịga nke ọma na ịbanye n'ime ọha mmadụ. Otú ọ dị, Sugie chọpụtara na, ná nkezi, ahụmahụ ndị ọrụ ya na-arụ ọrụ bụ ihe na-ezighị ezi, oge na-adịghị, na ihe ndị ọzọ. Otú a, nkọwa a nke usoro, ọ dị mkpa ka masks dị mkpa. Karịsịa, Sugie chọpụtara usoro ihe anọ dị iche iche n'ime ọdọ mmiri ya: "n 'ọpụpụ oge mbụ" (ndị na-amalite ịchọ ọrụ, ma kwụsịzie ọrụ ahịa), "nyocha na-aga n'ihu" (ndị na-etinye oge dị ukwuu na-achọ ọrụ) , "Ọrụ na-agagharị" (ndị na-etinye oge dị ukwuu), na "nzaghachi dị ala" (ndị na-adịghị azaghachi nyocha ahụ mgbe niile). "Ìgwè ndị si na mbụ" -bụ ndị malitere ịchọta ọrụ mana ha achọtaghị ya ma kwụsị nyocha-dị mkpa karịsịa n'ihi na otu a nwere ike ịbụ na o yikarịrị ka ọ ga-abanyeghachi na ya.
Onye nwere ike iche na ịchọta ọrụ mgbe ị nọ n'ụlọ mkpọrọ bụ usoro siri ike, nke nwere ike iduga ịda mbà n'obi ma wepụ ya n'ahịa ọrụ. Ya mere, Sugie ji nyocha ya iji nakọta data banyere ọnọdụ mmetụta uche nke ndị na-eso ya-ọnọdụ dị n'ime ala nke a na-adịghị achọpụta ngwa ngwa na data omume. N'ụzọ dị ịtụnanya, ọ chọpụtara na otu "ìgwè mbupụ" anaghị akọ ọkwa nrụgide ma ọ bụ enweghị obi ụtọ. Kama nke ahụ, ọ bụ ndị ọzọ: ndị nọgidere na-achọ ọrụ na-akọtakwu mmetụta nke obi mgbawa. Ihe omuma a nile, ihe omuma nke oma banyere omume na onodu nke obi ndi ozo bu ihe di nkpa iji mata ihe ngbochi nke ha nagide na ime ka ha weghagharia n'uwa. Ọzọkwa, ọ ga-abụrịrị na a tụlechara nkọwa a niile dị mma nke ọma na nchọpụta e mere.
Nnyocha data Sugie na ndị na-adịghị ike, karịsịa nchịkọta data nchịkọta, nwere ike ịwelite ụfọdụ nchebara echiche. Mana Sugie na-atụ anya nchegbu ndị a ma gwa ha okwu ya (Sugie 2014, 2016) . Usoro ndị ọzọ nyochaa usoro ya-ụlọ ọrụ nchịkwa nke ụlọ akwụkwọ mahadum nke ụlọ akwụkwọ mahadum-ma rube isi n'iwu niile dị ugbu a. Ọzọkwa, na-adabere na ụkpụrụ ndị dabeere na ụkpụrụ m na-akwado isi nke 6, ụzọ Sugie gafere ihe iwu dị ugbu a chọrọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ nwetara nkwenye ezumike bara uru site na onye ọ bụla so na ya, o nyeere ndị na-eso ụzọ aka ịkwụsị nsụgharị nke ala, ọ gbalịsiri ike ichebe data ọ na-achịkọta. Na mgbakwunye na iji nkesa zoro ezo na nchekwa data, ọ nwetakwara akwụkwọ akwụkwọ nzuzo site n'aka gọọmenti etiti, nke pụtara na ọ gaghị amanye ime ka ndị uweojii tụgharịa data ya (Beskow, Dame, and Costello 2008) . Echere m na ọ bụ n'ihi nlebara anya ya, ọrụ Sugie na-enye ndị nchọpụta ndị ọzọ ezigbo ihe nlereanya. Karịsịa, ọ na-adaghị adaba n'àgwà ọjọọ, ma ọ bụ zere nchọpụta dị mkpa n'ihi na ọ dị mgbagwoju anya. Kama nke ahụ, o chere nlezianya, chọọ ndụmọdụ kwesịrị ekwesị, kwanyere ndị na-eso ya ùgwù, ma mee ihe iji meziwanye profaịlụ-uru nke ọmụmụ ya.
Echere m na ọrụ nkuzi atọ dị na Sugie. Nke mbụ, ụzọ ọhụụ maka ịjụ jikọtara ya na usoro omenala nke sampling; cheta na Sugie weere ihe yiri nke ọma na-esite n'aka obodo a mara nke ọma. Nke abụọ, ogologo oge, nhazi oge ogologo nwere ike ịba uru karịsịa maka ịmụta ahụmịhe mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Nke atọ, mgbe nchịkọta data nchịkọta jikọtara na nnukwu ihe ọmụma data-ihe m chere ga-abawanye ụba, dị ka m ga-arụ ụka mgbe e mesịrị na isi nke a-a pụrụ inwe okwu ndị ọzọ gbasara ụkpụrụ omume. Aga m emeso nyocha nke oma na nkowa isi nke 6, ma oru Sugie na-egosi na okwu ndi a bu ndi na-eme nnyocha na ndi nwere uche.